Keating oo ka dayriyay hanaanka Caddaalada Soomaaliya | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Keating oo ka dayriyay hanaanka Caddaalada Soomaaliya
Keating oo ka dayriyay hanaanka Caddaalada Soomaaliya
Ergeyga gaarka ah ee xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Michael Keating oo xilka uu kasii dhammaanayo ayaa sheegay in awooda Sharciga Soomaaliya uu yahay mid aad u liita taasina ay sababto in uu dhaco Musuq Maasuq badan.
Waxaa uu ka dayriyay hanaanka Caddaaladda Soomaaliya oo uu sheegay in sanadihii lasoo dhaafay uu gaaray heerkii ugu hooseeyay taasina ay sababtay in ay dadku Fursado dhanka Cadaalladda ah ay ka raadiyaan meelo kale.
“Xeerka sharciga waa daciif, Habka Caddaaladda iyo Xeer-ilaalinta wuxuu ku dhow yahay in uu istaago, laakiin awoodda ayaa weli ah mid xadidan, Dowladdu ma haysato habab lagu hubiyo in xukunka la fuliyo, Inta badan, dadku waxay u jeedaan dhanka Al-Shabaab , halkan ay ka aadi lahaayeen dhanka dowladda” ayuu yiri danjire Keating.
Waxaa uu sheegay in Musuq maasuq daran uu ka jiro Soomaaliya, taasina ay saameyn doonto dadka aan la heyn Awoodaha ee Saboolka ah.
Dowladda Soomaaliya ayaa bilihii lasoo dhaafay waday dadaallo lagu dagaallamaayo Musuq Maasuqa dalka ragaadiyay, waxaana jiro xubno dowladda ka tirsanaa oo xabsiga la dhigay.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale dhankiisa qiray kal hore in Caddaalad daro ka jirto Maxkamaddaha dowladda, laakiin waxaa uu isbedel ku sameeyay Madaxda Maxkamaddaha dalka.